Veloma Le Professionnel: Maty ny kintana frantsay ikoizana Jean-Paul Belmondo
Home » Lahatsoratra farany farany » Entertainment » Veloma Le Professionnel: Maty ny kintana frantsay ikoizana Jean-Paul Belmondo
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao momba ny lamaody • Vaovao farany Brezila • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny sarimihetsika Belmondo dia nojerena niaraka in-130 tapitrisa mahery tamin'ny sinema.
Nodimandry tamin'ny faha-88 taonany i Jean-Paul Belmondo.
Maty ny angano momba ny indostrian'ny sarimihetsika frantsay.
Elaela tsy salama ilay mpilalao sarimihetsika rehefa tapaka lalan-dra tamin'ny 2001.
Nodimandry tamin'ny faha-88 taonany ilay superstar amin'ny sarimihetsika frantsay Jean-Paul Belmondo, izay nitifitra ny lazany teo amin'ny sehatry ny New Wave revolisionera Jean-Luc Godard, "Breathless", hoy ny fanamafisan'ny mpisolovava azy.
Nodimandry i Jean-Paul Belmondo
Efa tsy salama nandritra ny fotoana kelikely ilay mpilalao sarimihetsika tamin'ny 2001.
Belmondo - anaram-bosotra Bébel nomen'ny mpihaino frantsay - dia nanjary iray amin'ireo kintana boxe lehibe indrindra an'ny French New Wave tamin'ny taona 60 sy 70, ny endriny sahabo ho sahy mifanohitra amin'ny endrika voadonan'ny mpifaninana aminy sy ilay mpiara-miasa aminy taloha Alain Delon.
Teraka tamin'ny 1933 tao amin'ny tanàna ambanin'ny tanànan'i Paris, Neuilly-sur-Seine, zanakalahin'i Paul Belmondo, mpanao sary "pied-noir", nanatrika sekolin'ny sekoly ambony tsy miankina nefa tsy nahomby. Naneho fahalianana bebe kokoa tamin'ny fanatanjahan-tena izy, ary nanomboka tamin'ny asany ady totohondry amateur fony izy tanora. Taorian'ny nifindran'ny tuberculosis dia nanjary liana tamin'ny fampisehoana izy ary nanao fangatahana tao amin'ny Akademia Nasionalin'ny Dramatic Arts ambony, nahazo toerana tamin'ny 1952.
Taorian'ny fizarana diplaoma dia nanomboka nilalao tantara an-tsehatra i Belmondo, niseho tamin'ny filalaovan'i Anouilh, Feydeau ary George Bernard Shaw. Izy koa dia niantoka andian-tsarimihetsika kely.
Nanomboka tamin'ny anjara asany tao amin'ny "Breathless" an'i Jean-Luc Godard, dia lasa mpilalao foiben'ny sarimihetsika New Wave any Frantsa. Angamba fanta-daza indrindra amin'ny anjara asany amin'ny tantara an-tsehatra momba ny heloka bevava sy mampientam-po, izy koa dia nilalao melodrama niaraka tamin'i Romy Schneider sy Alain Delon. Fantatra akory fa nanao ny hataony manokana.
Nisolotena ny ratsy indrindra ny fahasalaman'i Belmondo tamin'ny 2001 rehefa voan'ny lalan-dra izy ary niditra hopitaly tany Paris, Frantsa. Narary tamin'ny ampahany tamin'ny aretin'ny tapaka lalan-dra izy ary tsy maintsy nandany fotoana hianarana hamindra sy hiresaka.
Niala sasatra tamin'ny fihetsika izy taorian'izay ary niverina tamin'ny sehatra lehibe tamin'ny taona 2009 niaraka tamin'ny “A Man and His Dog.” Hay ny sarimihetsika farany nataony ary tsy dia voarain'ny mpitsikera. Niala tsiny tamin'ilay asa i Belmondo taty aoriana saingy nilaza fa nanampy azy handresy ireo fiatraikany maharitra tamin'ny lalan-dra io.
Nilaza ny mpisolovavany Michel Godest fa maty tao an-tranony tany Paris io mpilalao sarimihetsika io. “Reraka be izy nandritra ny fotoana elaela. Maty mangina izy. ”
FM Whatsapp Apk hoy:
September 19, 2021 ao amin'ny 13: 17
misaotra nizara izany vaovao feno fandriampahalemana izany dia tazomy izany.